UFrosler ufuna ingatatazeli iChiefs eGuinea - Impempe
UFrosler ufuna ingatatazeli iChiefs eGuinea
April 9, 2021 April 9, 2021 Impempe.com
Isineke nokukholelwa ekutheni bangawufeza umsebenzi abathunywe wona le eGuinea yikho uReeve Frosler athi kungabawezela emzuliswaneni olandelayo kwiCaf Champions League.
Amakhosi kumanje ale eGuinea la ezobhekana khona neHoroya AC emdlalweni wokugcina kwiGroup C yeChampions League nozocacisa ukuthi bayadlulela phambili noma indlela iyaphela. Lo mdlalo uzoba ngoMgqibelo ntambama.
Leli qembu likaGavin Hunt lidinga ukudlala ngokulingana kodwa Kube namagoli noma liwine ukuze libalwe emaqenjini ayisishiyagalombili azongena esigqokweni uma sekuqhathwa azobhekana emzuliswaneni womkhumulajezi.
IChiefs isendaweni yesithathu kumanje kanti iyalingana ngamaphuzu neHoroya, bese kuthi iWydad Athletic yaseMorocco yona isendaweni yokuqala futhi seyivele izibekisele indawo emzuliswaneni olandelayo.
“Sizizwa silahle, sizizwa sigcwele ukuzethemba,” usho kanje uFrosler ngenselelo abazobhekana nayo eGuinea. “Uma ubheka umphumela wethu wokugcina kulo mncintiswano, senza kahle (beshaya iWydad ngo 1-0) ngakho sidinga ukuthatha umfutho wawo site nawo emdlalweni olandelayo, futhi ngethemba ukuthi sizoqhubeka kulo mqhudelwano.
“Okubaluleke kakhulu kithi njengamanje wukuthi sizethembe, sikhelelwe emakhonweni ethu. Ekuhambeni izinto zizobe zishintshe kakhulu kodwa kumele sibe nesineke bese sikholwa wukuthi singayenza lento – singadlula kulesi sigaba,” kuchaza lo mdlali oneminyaka engu-23 ubudala.
Uthe amava yena nabanye ozakwabo abasebancane njengoNkosingiphile Ngcobo noNjabulo Blom azobasiza ukubabeka ethubeni elingcono uma sekuqokwa iqembu lesizwe labafana abaneminyaka engaphansi kuka-23 elizoya kuma-Olympic Games eBeining, eJapan ngoJulayi.
“Okokuqala ngidlala ngize ngifike kulesi sigaba kwiChampions League, ngakho ngiyakuthokozela lokhu. Ukuhambela amazwe ehlukene sekunzinyana ngenxa yeCovid-19, kodwa ngenza konke ukulisebenzisa ngendlela leli thuba engilinikiwe.
“Kusinika isipiliyoni ukudlala ezingeni lamazwe ngamazwe, sizolithatha leli thuba sincele konke ulwazi esingaluthola ukuze uma sethenjwa ngethuba lokumela izwe sibe sesikuqonda okudingajalayo ezimweni ezinjena. Kuyasikhulisa singabadlali,” kuchaza uFrosler.
Previous Previous post: EZINGENA MANJE: Sidalula amagama abaqeqeshi abane abaseqhulwini kweseBafana
Next Next post: Isiwalungisile amaphutha iSuperSport